နဂရရာဇသီမာဒေသ၏ စီးပွားရေးမှာ အစဉ်အလာအရ စိုက်ပျိုးရေးပေါ်တွင် မှီခိုနေသည်။အီဆန်ဒေသ၏ စပါး၊အုံး (tapioca)နှင့် သကြားထုတ်လုပ်ရာ အဓိကနေရာဖြစ်သည်။ အီဆန်ဒေသသည် ၎င်းကုန်စည်များအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ထုတ်ကုန်အပိုင်းတွင် တစ်ဝက်မျှအထိ ထုတ်လုပ်ရာဒေသဖြစ်သည်။ ထိုထုတ်ကုန် ၃ မျိုးသည် အီဆန်ဒေသတွင်း ၇၀၀၀၀၀ မိသားစုကို အလုပ်အကိုင် အခင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် နခွန် ရတ်ချာစီမာမှာ Seagate Technology၏ disk drives ထုတ်လုပ်ရာ ၂ မြို့မှ တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းသည် နခွန် ရတ်ချာစီမာ၌ အလုပ်သမားပေါင်း ၁၂၁၀၀ကို အလုပ်အကိုင်ပေးနိုင်သည်။
↑  (1987) "13 Siam, 1767–1868", In search of south-east Asia, Revised, Honolulu: University of Hawaii Press, 113–117. ISBN 0-8248-1110-0. OCLC 500095794။
↑ "Court orders five to pay Bt152 million compensation for Korat Hotel collapse"၊7March 2009။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နဂရရာဇသီမာမြို့&oldid=454672" မှ ရယူရန်
၂၃ မတ် ၂၀၁၉၊ ၂၃:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။